Yintoni iArduino? | Izixhobo zasimahla
UJoaquin Garcia Cobo | | Arduino
Sonke sivile malunga neProjekthi yeArduino kunye neziphumo zayo ezilungileyo kwilizwe leHardware, kodwa inyani kukuba bambalwa abakwaziyo ukuba yintoni iArduino kwaye yintoni esinokuyenza ngebhodi enjalo okanye ukuba yintoni kanye le iprojekthi yeArduino.
Kule mihla kulula kakhulu ukuyifumana ibhodi ye-arduino, kodwa kuya kufuneka sazi kwaye sibe nento engaphezulu kwebhodi yeHardware elula apho kunokuthi kuqhagamshelwe iintambo ezimbalwa kunye nezinye iibhalbhu ze-LED.
1 Yintoni na?
2 Igama lakho lavela njani?
3 Yahluke ngantoni kwiRaspberry Pi?
4 Zeziphi iimodeli zepleyiti ezikhoyo?
5 Yintoni ekufuneka siyenzile ukuze isebenze?
6 Ezinye iiprojekthi esinokuzenza ngebhodi yeArduino
Iprojekthi yeArduino yintshukumo yeHardware leyo ifuna ukudala i-PCB okanye ibhodi yesekethe eprintiweyo enceda nawuphi na umsebenzisi ukuba enze kwaye aphuhlise iiprojekthi zombane zokugqibela nezisebenzayo. Yiloo nto ipleyiti I-Arduino ayikho enye into ngaphandle kwebhodi ye-PCB esinokuyiphindaphinda amaxesha ngamaxesha njengoko sifuna ngaphandle kokuhlawula ilayisenisi okanye ixhomekeke kwinkampani ngokusetyenziswa kwayo kunye / okanye ekudalweni kwayo.
Le ntshukumo (iProjekthi yeArduino) ifuna ukwenziwa kweHardware yasimahla ngokupheleleyo, oko kukuthi, nawuphi na umsebenzisi angazakhela iibhodi zakhe kwaye azenze zisebenze ngokupheleleyo, ubuncinci ngokusebenza njengeebhodi esinokuzithenga.
Le projekthi yazalwa ngo-2003 xa abafundi abaliqela abavela kwiziko le-IVREA befuna enye indlela kwiibhodi ezine-BASIC Stamp microcontroller. La macwecwe abiza ngaphezulu kwe- $ 100 ngeyunithi, ixabiso eliphezulu kuwo nawuphi na umfundi. Ngo-2003 kuphuhliso lokuqala olubonakala luyilo olukhululekileyo noluntu kodwa olulawulayo alonelisi umsebenzisi wokugqibela. Iya kuba ngo-2005 xa i-Atmega168 microcontroller ifika, i-microcontroller engagunyazisi ibhodi kuphela kodwa eyenza ulwakhiwo lwayo lufikeleleke, kude kube namhlanje iimodeli zebhodi ye-Arduino zinokubiza i-5 yeedola.
Igama lakho lavela njani?
Le projekthi ifumana igama layo kwindawo yokucima ukoma kufutshane neZiko le-IVREA. Njengoko besitshilo, le projekthi yazalwa kushushu eli ziko lifumaneka e-Itali kwaye kufutshane neli ziko, kukho ithaveni yabafundi ebizwa ngokuba yiBar di Re Arduino okanye iBar del Rey Arduino. Imbeko yale ndawo, Abaseki beprojekthi, Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino no David Mellis, bagqiba kwelokuba babize iibhodi kunye neprojekthi iArduino.
Ukusukela ngo-2005 ukuza kuthi ga namhlanje, iProjekthi yeArduino khange ibe nangxabano malunga neenkokheli kunye namalungelo epropathi. Ngenxa yoko, kukho amagama ahlukeneyo anjengeGenuino, eyayiligama elisemthethweni leepleyiti zeProjekthi ezazithengiswa ngaphandle kweMelika kunye ne-Itali.
Yahluke ngantoni kwiRaspberry Pi?
Abasebenzisi abaninzi badibanisa ibhodi yeRaspberry Pi kunye neebhodi zeArduino. Ukusukela uninzi lwee-novice kunye nabantu ongabaziyo kulo mbandela, zombini iipleyiti zinokubonakala ngathi ziyafana, kodwa akukho nto inokugqitha kwinyani. I-Arduino yi-PCB ene-microcontroller, kodwa Ayinamprosesa, ayikho i-GPU, ayinayo inkumbulo yegusha kwaye akukho zibuko lokukhutshwa njenge-microhdmi, i-wifi okanye ibluetooth Oko kusenza sikwazi ukuguqula ibhodi ibe yicomputer yekhompyutha; kodwa iArduino yibhodi enokucwangciswa ngengqondo yokuba singalayisha inkqubo kwaye izixhobo zekhompyutha ezisetyenzisiweyo ziya kuyenza loo nkqubo: nokuba yinto elula njengokucima / ukucima ibhalbhu yesibane se-LED okanye into enamandla njengenxalenye yombane yomshicileli we-3D.
Zeziphi iimodeli zepleyiti ezikhoyo?
Iibhodi zeProjekthi yeArduino zahlulwe zangamacandelo amabini, Udidi lokuqala luya kuba yibhodi elula, ibhodi ye-PCB encinci y Udidi lwesibini luya kuba ngamakhaka okanye iiplate zokwandisa, iibhodi ezongeza ukusebenza kwibhodi yeArduino kwaye ixhomekeke kuyo ekusebenzeni kwayo.
Phakathi kweemodeli zebhodi ezidumileyo zeArduino zezi:
Kwaye phakathi kweemodeli ezikhuselekileyo okanye eziluncedo zeArduino zezi:
IArduino GSM Shield
IArduino Proto Shield
I-Arduino Motor Shield
Zombini iipleyiti kunye namakhaka ziimodeli ezisisiseko. Ukusuka apha siya kufumana iikiti kunye nezixhobo eziza kuba nenjongo yokwenza iArduino iphuhlise umsebenzi othile ngakumbi njengeprojekthi yeCloneWars eyenza izixhobo zokuguqula ibhodi yeArduino MEGA ibe ngumshicileli onamandla we-3D.
Yintoni ekufuneka siyenzile ukuze isebenze?
Nangona inokubonakala ingekho ngqiqweni okanye ingaqhelekanga, ukuba ibhodi yeArduino isebenze ngokufanelekileyo, siya kufuna izinto ezimbini: amandla kunye nesoftware.
Okokuqala kuyacaca, ukuba siza kusebenzisa icandelo le-elektroniki, siya kufuna amandla anokukhutshwa kumthombo wamandla okanye ngokuthe ngqo kwesinye isixhobo sombane ngombulelo kwigalelo laso le-usb.
Siza kufumana isoftware enkosi kwi-Arduino IDE eya kuthi isincede senze, siqokelele kwaye sivavanye iinkqubo kunye nemisebenzi esifuna ukuba ibhodi yethu yeArduino ibe nayo. I-Arduino IDE sisoftware yasimahla esinokufikelela kuyo le webhu. Nangona singasebenzisa naluphi na olunye uhlobo lwe-IDE kunye nesoftware, inyani kukuba kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe iArduino IDE okoko Inokuhambelana okuphezulu nazo zonke iimodeli ezisemthethweni zeProjekthi yeArduino kwaye iya kusinceda sithumele yonke idatha yekhowudi ngaphandle kwengxaki..
Ezinye iiprojekthi esinokuzenza ngebhodi yeArduino
Nazi ezinye zeeprojekthi esinokuthi sizenze ngeplate elula yale projekthi (nokuba yeyiphi na imodeli esiyikhethayo) kwaye ziyafumaneka kuye wonke umntu.
Igajethi eyaziwayo kunazo zonke kwaye enye inike iprojekthi yeArduino udumo olungathandabuzekiyo Umshicileli 3d, ngakumbi imodeli Prusa i3. Le gadget yotshintsho isekwe kwi-extruder nakwibhodi ye-Arduino MEGA 2560.
Emva kokuphumelela kwale projekthi, kwazalwa iiprojekthi ezimbini ezifanayo Zisekwe kwiArduino kwaye zinxulumene nokushicilelwa kwe3D. Eyokuqala kuzo yayiya kuba iskena sento ye-3D usebenzisa ipleyiti Arduino UNO kwaye eyesibini yiprojekthi esebenzisa ibhodi yeArduino ukuze iphinde isetyenziswe kwakhona kwaye yenze intambo entsha yeeprinta ze3D.
Ilizwe le-IoT yenye yeendawo okanye iindawo apho iArduino inenani elikhulu leeprojekthi. UArduino Yún yimodeli ekhethiweyo yezi projekthi ezenza ukutshixa ngombane, izinzwa zeminwe, iisenzi zemeko-bume, njl. Ngamafutshane, ibhulorho phakathi kwe-Intanethi kunye nezinto zombane.
Esi sisishwankathelo esincinci seProjekthi yeArduino kunye neebhodi zeArduino. Isishwankathelo esincinci esinika umbono wokuba zithini na ezi ziipleyiti, kodwa njengoko besesitshilo, ukuqala kwazo kubuyela ku-2003 kwaye ukusukela ngoko, amacwecwe I-Arduino ibikhula kungekuphela kwintsebenzo okanye amandla kodwa nakwiiprojekthi, amabali, iingxabano kunye neenyaniso ezingapheliyo ezenza iArduino ibe yinto ekhethekileyo kwiiprojekthi zeHardware zeHlabathi okanye nje nayiphi na iprojekthi enxulumene ne-Electronics.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izixhobo zasimahla » Arduino » Yintoni iArduino?
Yenza umatshini wakho wearcade Raspberry Pi
Loluphi ulwimi lokufundisa abantwana bam